Cimiladu waxay soo saartaa Twitter Meta Tags Sheega si aad u kiciso ololahaaga SMM
Shirkad kasta waxay ku guuleysan kartaa samaynta ganacsi internet ah oo guuleysta. Tusaale ahaan, waxaa suurtogal ah in dadku adeegsadaan adeegyadan si ay u keenaan macluumaad joogto ah oo ku saabsan macluumaadka loo baahan yahay si loo sii wado qorshayaasha suuq-geynta internetka oo guuleysta. Xaaladaha kale, dadku waxay isticmaalaan fursadda ah in ganacsi ay ku guuleystaan ​​ganacsi guuleysi leh ee ganacsiga adduunka. Xeeladaha suuq-geynta sayniska sida Suuqa Warbaahinta Bulshada (SMM) ayaa dardar gelin kara waxyaabo badan oo ku saabsan guulaha ganacsiga ee ganacsiga. Waxaa sidoo kale dhici karta marxalado badan oo dadka ka dhasha faa'iidada weyn ee suuq geynta Twitter
Tilmaamahan, oo uu bixiyay Nik Chaykovskiy, Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamiisha ee Semt , ayaa sidoo kale ka caawin kara isticmaalaha in uu gaaro dhinacyo badan oo ah horumarinta shabakadda sida abuurista bogga
Warbaahinta Bulshada Suuq-geynta suuq-galyada sida suuq-geynta Twitter waxay dadka ka caawin kartaa in ay horumarin ballaaran ka sameeyaan habka macaamiisha uugu xirto boggooda internetka. Twitter waa shabakad warbaahineed oo caadi ah oo SEO ah - querfeldein laufenn. Isticmaalayaasha ku jira boggani waxay dhexdhexaadinayaan isticmaalka tweeting. Waxaad awoodi kartaa inaad ku gaaro malaayiin macaamiisha suurtogalka ah ee aad ku isticmaali kartid farsamooyinka naqshadaynta Twitter. Tusaale ahaan, isticmaalka qoraallada gaarka ah ee Twitter waxay ka caawisaa dadka oo dhan inay ku guuleystaan ​​fursado badan oo guul ah oo ku wajahan arrintan gaarka ah
Abuuri qaababka caadiga ah
SEO-ga, cilmi-baarista muhiimka ah waa arrin muhiim ah..Xaaladda SMM, tagska iyo sharaxaada waa inay ku jiraan qaar ka mid ah ereyada muhiimka ah ee loogu talagalay isticmaalka ee liiska. Kuwa websaydhka ah ee ku tiirsan SMM, tixraacyada Twitter waa inay leeyihiin ereyada muhiimka ah ee ka caawiya xagga darajada. Qalabka raadinta Twitter wuxuu leeyahay mashiinka raadinta oo ku xiran kara dhinacyada ku jira naftaada si aad u eegto waxyaabahaaga. Waxa kale oo muhiim ah in la abuuro sheybaarada caadiga ah hawshaas. Noocyada otomaatiga ee SEO waxay u diri karaan sheybaar shakhsiyeed oo loogu talagalay qof kasta. Macmiilayaasha isticmaalaya qaababka caadiga ah waxay leeyihiin faa'iido u ah geedi socodka si dhakhso ah. Waxaa jira code API fudud oo dadka isticmaala ay shaqaaleeyaan inay sameyaan geeddi-socodka oo dhan guusha.
Isticmaal ereyada muhiimka ah ee ku jira mawduucaaga
Cilmi-baaris kasta oo muhiim ah, SEO waxay u baahan tahay ereyada dheeraadka ah ee ereyada loogu talagalay isticmaalka qaybaha ugu muhiimsan ee bogga. Qeexitaanka meta, iyo waliba qaybaha kale ee mawduuca, waxay u baahan yihiin macluumaad kaas oo laga raadinayo isticmaalayaasha internetka. Dadku waxay abuuraan fikrado kala duwan oo kala duwan marka la siinayo farriimo Twitter ah oo ah mudnaanta koorsooyinka raadinta "Search Engine Optimization" ee bogagga shabakadaha. Nidaamyada Maareynta Maareynta Maareyntu waxay leeyihiin dhinacyo kala duwan oo ka caawinaya dadka inay sameyaan isbaddallo lagama maarmaanka u ah sida bogagga ay uga jawaabaan baahiyaha user Tusaale ahaan, kaararka hadiyadaha Twitter-ka ee qadka telefoonka ee Twitter wuxuu ka caawiyaa dadka isticmaala Twitter inay sameeyaan isbeddel lagama maarmaanka u ah ololeyaasha xayeysiinta iyo sidoo kale dhinacyo kale oo horumarineed oo webka ah.
Search Engine Optimization waxay ka caawin kartaa webmaster kasta in uu gaaro malaayiin macaamiisha iyada oo la adeegsanayo farsamooyinka suuq-geynta fudud. Waa suurtagal in la sameeyo qaababka Suuq-geynta Warbaahinta Bulshada, iyo sidoo kale qalabka kale ee SEO, kordhiya macaamiisha u soo gudbiyaan boggaaga. Waxaa jira dhaqdhaqaaqyo kale oo dadku isticmaalaan si ay u gutaan ololaha suuq-geynta. Xaaladaha waaweyn ee wax soo saarka ah, tagsiyada Twitter ayaa lagama maarmaan u ah inay diraan fariimo deg deg ah. Waxaad awoodi kartaa inaad sameyso isbeddello badan habka uu Twitter u gaaro kartidooda ugu sareysa.